HERO OF MYANMAR: ၂၁ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
[8:30 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
တပ်ကြပ်ကြီးက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သား သင်္ဘောမောင်းသူ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး click
- ကရင်ပြည်နယ်က နယ်ခြားစောင့် နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ တိုက်ပွဲသံတွေ click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံမှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျေနပ်အားရ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ခရီးစဉ် ပြီးဆုံး click
- စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ စီးပွားရေးဂျာနယ် တက်ရောက်ခွင့်မရ click
- ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် ရခိုင်၌ အခွန်များ တိုးကောက်နေ click
- ကသည်းသူပုန်များ၏ ဆက်ကြေးတောင်းမှုကြောင့် တမူးမြို့က နန်းဖာလုံဈေး ပိတ် click
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသေးသော မြန်မာပြည် (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာအစိုးရရဲ့ အကျပ်အတည်းများကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ (ဆောင်းပါး) click
- ဦးကြည်မောင် အမှတ်တရများ (ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ) click
- ဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၇ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ) click
- ၃၉ ကြိမ်မြောက် မဲဆောက် တရုတ်ဘုံကျောင်း ဆန်လှူပွဲ (ဓာတ်ပုံ) click
- အထီးကျန် သံလွင်လမ်းခွဲ (၀တ္ထတို) click
- အိမ်ကလေး ၂ (၀တ္ထတို) click
- မြစ်ကောနဲ့ ရေစုန်မျှော (ကဗျာ) click
- အထင်ကြီးချင်သလား ရုရှားစစ်သား – အပိုင်း (၁) (ဆောင်းပါး) click
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံမှုကို မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ထုတ်လွှင့်တာကို မြင်ရတာဟာ ကြည်နူး ဝမ်းမြောက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက် ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်း ရှိပါသေးတယ်။ သတိထားမိ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ အဲဒါကတော့ သမ္မတ ရုံးခန်း အတွင်းမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် သမ္မတများ၊ ဝန်ကြီးချုပ်များရဲ့ ဓာတ်ပုံများ၊ ပန်းချီကားများကို ပြသထားသလို သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့တဲ့ ထိုင်ခုံ နောက်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံကို ချိတ်ဆွဲထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ယှဉ်တွဲပြီး ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံတဲ့အခါ နောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို နောက်ခံထား အရိုက် ခံထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာ သင်္ကေတ နမိတ်ပုံတွေဟာ စကားလုံးတွေ လိုပဲ အရေးပါပါတယ်။ အခု သမ္မတ ရုံးခန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အပါအဝင် ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ အားလုံး (ဦးနု၊ ဦးနေ၀င်းက အစ) ရဲ့ ပုံကို ချိတ်ဆွဲ ထားခြင်းဟာ သမ္မတရဲ့ သမိုင်းအပေါ် အမြင်နဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး အပေါ် ထားတဲ့ Message လို့ မြင်မိပြီး အဲဒီလို မြင်ရတဲ့ အတွက် ကြည်နူး ရကြောင်းပါဗျာ။
ဆင်းရဲ မွဲတည်မူ လျှော့ချရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် ရခိုင်၌ အခွန်များ တိုးကောက်နေ - နိရဉ္စရာ click here
ကသည်းသူပုန်များ၏ ဆက်ကြေးတောင်းမှုကြောင့် တမူးမြို့က နန်းဖာလုံဈေးပိတ် - ဒီဗွီဘီ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အလုပ်ရုံစည်းဝေးပွဲ တက်ရောက် - ဒီဗွီဘီ click here
စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး - ဘီဘီစီ click here
အဝေးရောက် အစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်ချက် - ဘီဘီစီ click here
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုတွေရဲ့ သဘောထား - ဘီဘီစီ click here
အပစ်အခတ်ရပ်ဖို့ တစုတစည်းထဲ ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆို - ဘီဘီစီ click here
နိုင်ငံ့စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရး ဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်စုတက်ရောက် - ဘီဘီစီ click here
လယ်ယာမြေ ဥပဒေအပါအ၀င် ဆွေးနွေးစရာတွေများ - ဘီဘီစီ click here
စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်စု တက်ရောက် - ဗွီအိုအေ click here
လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် စတင် - ဗွီအိုအေ click here
ကျပ်ငွေဈေးကျ၊ လမ်းများပျက်လို့ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်း - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဒေါ်စုရဲ့ နေပြည်တော်ခရီးစဉ် သူတို့ ဒီလိုမြင်ကြတယ် (အသံ) - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ကရင်ပြည်နယ်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်က အဓမ္မ ငွေကောက် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ကလေးမြို့နယ် NLD နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ကူညီ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
အစိုးရတပ်မှ ကေအဲန်ယူထံ လက်နက်ကြီးများဖြင့် လှမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ - KIC click here
ဆွဲမိုင်းကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ လုံခြုံရေးတပ်သားတစ်ဦး ထိခိုက် - KIC click here
ဌာနချုပ် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း သတင်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း ALP ငြင်း - နိရဉ္စရာ click here
ယာဘာ ဆေးပြားများ သယ်လာသူ ၂ ဦး စစ်တွေ လေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရ - နိရဉ္စရာ click here